Passport ~ Journey-Assist - Karazan'ireo pasipaoro iraisam-pirenena. Visa.
Pejy fandraisana » Torohevitra mahasoa Travel » pasipaoro
Mihabetsaka ny isan'ny olona mandeha any ivelany. Izany dia noho ny antony maro isan-karazany, avy amin'ny faniriana hahita izao tontolo izao, mankany amin'ny fitsangatsanganana orinasa (misimisy kokoa momba izany eto).
Tsotra ny valiny - mazava ho azy izany. Mba hanaovana izany dia mila mifandraika amin'ny solontena diplaomaty na consular an'ny firenenao ao amin'ity fanjakana ity ianao mba hahazoana antontan-taratasy fohy manaporofo ny maha-izy anao ary hanome anao ny zon-jiro hiverina amin'ny tanindrazanao.
Ho an'ny solontena avy amin'ny firenena samihafa, ny isan'ireo firenena azon'izy ireo mitsidika tsy misy visa, miaraka amin'ny visa rehefa tonga, na amin'ny visa iray mialoha, dia miovaova. Ohatra:
Emirà Arabo Mitambatra (Emirà Arabo Mitambatra). 1. toerana eto amin'izao tontolo izao raha ny fahalalahana mihetsika. Manan-jo hitsidika ny firenena 116 eran'izao tontolo izao izy ireo tsy misy visa. Firenena 57 no mahazo visa ary visa no takiana hitsidika firenena 25.
United States (Etazonia) Faha-15. ny toerana. Visa maimaimpoana ho an'ny firenena 117. Tonga any amin'ny firenena 50 i Visa. Ilaina ny visa amin'ny firenena 31.
Ukraine - Faha-64. ny toerana. Visa maimaimpoana ho an'ny firenena 91. Visa rehefa tonga any amin'ny firenena 43. Ilaina ny visa (visa) any amin'ny firenena 64.
Afghanistan - Ny farany efa 98 toerana. Visa maimaimpoana ho an'ny firenena 5. Visa rehefa tonga - firenena 25. Ilaina ny visa any amin'ny tany 168.
Ny pasipaoro dia mety ho karazana roa. Biometrika ary tsy misy biometrika.
Raha manana fanontaniana ny mpiambina ny sisintany dia afaka manao fangatahana elektronika amin'ny firenenao izy mba hangataka lakile virtoaly izay manokatra ity fampahalalana manokana ity, izay afaka mampahafantatra bebe kokoa ny mombamomba anao. Ny pasipaoro biometric dia nanomboka nampidirina am-pahavitrihana tamina firenena maro eran'izao tontolo izao taorian'ny fanafihana ny 11 septambra tany Amerika. Ary koa, mila tadidinao fa ny firenena maro dia avela miditra raha tsy manana pasipaoro Biometric. (ny pasipaoro tsy misy biometrika taloha tsy hiasa).
Ny voalohany sy lehibe indrindra - Na ny zaza vao teraka aza mila pasipaorony pasipaika any ivelany.
ankizy hatramin'ny taona 12 aza manome rindan-tanana. Saingy tsy misy fiantraikany amin'ny maha-mahasoa io tahirin-kevitra io. Mandritra io vanim-potoana io, ny pasipaoro iray avoaka mandritra ny 4 taona. Na dia efa natao ho an'ny zazakely aza ny pasipaoro dia mila ovaina matetika ny pasipaoro, satria tokony ho toa ilay sary ao anaty pasipaoro ilay zaza. Ary koa, na dia eo aza ny tsy fahampian'ny rantsantanana, ity pasipaoro ity dia tsy mijanona ho biometric. Famantarana ny ho fisian ny sombin-taratasy misy ao amin'ny antontan-taratasy.
Ny dingana farany "zaza", ireto dia zaza 14-16 taona. Amin'izao vanim-potoana izao, ny pasipaoro iray avoaka noho ny fisian'ny karapanondro (tandindona pasipaoro anatiny). Ary koa, manomboka amin'ny 14 taona dia tsy nandefa sora-tànana ny ankizy, fa mametraka sonia eo amin'ny pasipaorony ihany koa.
С 16 taona, ny ankizy dia efa nahazo pasipaoro "olon-dehibe" feno, ny maha-10 taona ny fiverenany.
Ny pasipaoro iray no antontan-taratasy voalohany ilaina ilaina hahitanao tontolo lehibe 🙂